Shirkadda Golis Oo Dhintay Qiimaha Dibadda Lagu Waco Adeegyo Cusubna Soo Bandhigtay [Sawiro] - Horseed Media
Shirkadda Golis Oo Dhintay Qiimaha Dibadda Lagu Waco Adeegyo Cusubna Soo Bandhigtay [Sawiro] April 16, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleShirkadda isgaarsiinta ee Golis oo kamid ah kuwa ugu waaweyn dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland ayaa maanta soo bandhigtay adeegyo cusub iyadoo sidoo kale dhintay qiimaha lagu waco dibadda.
Shir saxaafadeed oo ay maanta mas’uuliyiinta ugu sareeya shirkadda Golis ku qabteen gudaha xarunta ugu weyn ee shirkadda oo ku taal magaalada Boosaaso ayey kusoo bandhigeen dhowr adeeg iyo qiimi dhimis noqonaysa tii ugu balaarnayd ee ay shirkadu abid samayso.
Mas’uuliyiintii shirkaas saxaafadeed ka hadlayna waxaa kamid ahaa Madaxa howlgalada ee shirkadda Golis ahna sii hayaha xilka maareeyaha guud Cabdilaahi Cali Cumar, madaxa xafiiska suuqgeynta Siciid Xuseen Ciid, ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Jaamac Dayax iyo madaxa xafiiska ganacsiga Cumar Ciise Maxamed (Faaruuq).
Madaxa suuqgeynta ee shirkadda Golis Siciid Xuseen Ciid oo isagu ugu horeyn saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey adeegyada cusub ee ay shirkaddu soo kordhisey isagoo xusay inay yihiin kuwo ay bulshada faa’iidooyin badani ugu jiraan.
Madaxa howlgalada ahna sii hayaha xilka maareeyaha guud ee shirkadda Golis oo intaas kadib hadalka qaatay ayaa ku dheeraaday sida ay shirkadda Golis uga go’an tahay inay adeegga isgaarsiinta u wada gaarsiiso dhamaan deegaanada Puntland, isagoo sheegay in shirkaddu ay mar walba u taagan tahay sidii ay adeegga isgaarsiinta bulshada uga haqab tiri lahayd.
Madaxa ganacsiga ee Golis Cumar Ciise Maxamed (Faaruuq) ayaa isna faah faahin ka bixiyey mid kamid ah adeegyada ay shirkaddu maanta soo bandhigtay kaas oo ah adeegga Ku-naso. Adeeggan ayaa ha mid aad ku xiranaysid moobilkaaga ay dadka kusoo wacayaa inta uu mobileku u dhacayo maqlayaan.
Adeegyada Cusub ee ay Golis Maanta Soo Bandhigtay:
Waa adeeg kuu sahlaya inaad u doorto dadka kusoo wacaya cod ay maqlaan inta uu Telefoonku u dhacayo sida: Qur’aan, Nashiidooyin, Xadiisyo iyo suugaan kala duwan sida: Gabayo, Geeraaro, iyo buraanbur.
Codka aad doorato waxaa maqli doona qofka kusoo waca iyadoo codka caanka ah ee marku ay Telefoonadu dhacayaan la maqlo uu bedeli doono hadba codkii aad ka doorato kuwaas kor ku xusan.
Waa adeeg dhowr jeer oo hore ay shirkadda Golis macaamiisheeda ugu fududaysay, adeeggan ayaa ah mid khuseeya ku shubashada daqiiqadaha hadalka, waxaana qofkii lacag ku shubtaa uu helayaa %10 oo free ah.
Qiima dhimista ay shirkadda Golis maanta samaysay oo ah tii ugu badnayd ee ay shirkad ka tirsan kuwa isgaarsiinta ee geeska Africa ka shaqeeya samayso ayaa ahayd sidan:
Qiimaha halkii daqiiqo lagu wacayo dhamaan dalalkan waxay shirkaddu ka dhigtay 0.20$.
Qiimaha halkii daqiiqo lagu wacayo dhamaan dalalkan oo ah kuwo ay Soomaali arday iyo ganacsato u badani ku dhaqan yihiin ayaa ah 0.10$ oo u dhiganta labo kun oo shilin.
Qiimaha lagu wici karo dhamaan wadamad Yurub waa isku mid, waxayna shirkaddu ka dhigtay in halkii Dollar lagula hadli karo qofka Yurub jooga muddo dhan 5-daqiiqo.
Qiimaha lagu wici karo dalalka Maraykanka iyo Canada waxay shirkaddu ka dhigtay in halkii Dollar lagula hadli karo qofka labadaas dal jooga muddo 15-daqiiqo ah.
Horay shirkadda Golis waxay u dhintay qiimaha lagu waco gobolada dalka gaar ahaan kuwa koonfurta iyo waqooyi galbeed (Somaliland).